Shina: Very Saina Ve i Crazy English e? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2007 17:16 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, English
Toeram-pampianarana tsy miankina mampirisika fomba fampianarana teny anglisy vaovao ny sekoly Crazy English naorin’I Li Yang; izany hoe, manadino amin’izay ny fehezanteny anglisy tranainy ary mitady araka izay azo atao ny fomba ahafahana miresaka amina mpiteny anglisy iray, ary manifika amin’ny fomba rehetra ny fahamenarana ihany koa ao anatin’izany. Asaina miteny mafy amin’ny heriny manontolo ny mpianatra ao aminy rehefa miteny anglisy.
Manana toeram-pianarana manerana an’I Shina izy, ary malaza tokoa fa mpianatra anarivo arivony no nandalo nianatra tao hatramin’ny niforonany tsy ampy folo taona akory izay. Na izany aza, niteraka adi-hevitra mafana nahazoana na fanamelohana, na esoeso, eny, fanohanana ihany koa sary iray vao natoraka tao amin’ny Blaogin’I Li Yang. Ny resabe nameno ny haino aman-jery sy ny tontolon’ny blaogy no mahatonga ny tantara ho tsy azo idifiana intsony.
Ny sary izay natoraka tamin’ny 4 septambra dia mampiseho mpianatra 3000 mandohalika eo anoloan’ireo mpampianatra teny anglisy. Sary nalaina nandritra ny fotoam-panokafana ny Crazy English Training Base faharoa tao Bao Tou, anivon’i Mongolia izany sary izany. Mpianatra avy amin’ny sekoly ambony ao antoerana avokoa izy ireo. Olon’ny aterineto maron o nisafoaky ny hatezerana raha vao nahita ary nanameloka fa tsy fanabeazana izao fa fanasana ati-doha ho amin’ny fanompoana sy ny fahatahorana. Any Shina manko, ny fandohalehana dia endrika hanehoana fanekena ho andevon’ny tompom-pahefana. Nanontany ny mpitoraka blaogy Tong Wandou(铜豌豆) hoe :
Na dia endri-panajana ambony indrindra aza ny famoretana lohalika dia fomban’ny mpanjaka mampivoitra bebe kokoa ny tsy fitoviana eo amin’ny samy olona io fa tsy endrim-panajana antonona ny fiaraha-monina maoderina loatra
Xu Xiaoping（徐小平）, mpampianatra ao amin’ny New Oriental, sekoly hafa manampy ny hafa hanana Toefl sy SAT, ihany koa dia namatrapatraka fanakianana ho an’i Li Yang hoe :李阳接受学生下跪事件，必将成为2007
Ny fisehoan-javatra naneken’i Li Yang ny fandohalehan’ny mpianatra no zava-baovao hanamarika ny fampianarana amin’ity taona ity. Mampiharihary io fa very haja mihitsy ny fampianarana eto Shina. Navelan’i Li Yang hotombatombanana aloh izay dikan’ny fiforetana lohalika mahatsiravina iny . Tsy manaporofo na inona na inona anefa ireny fihetsika ireny afa-tsy hoe ny dikan’ny manabe mihitsy no tsy hainy.
Misy aza moa ny manampy trotraka mampitaha an’i Li Yang ho mpitarika fivavahana amin’ny maizina(邪教):
笔者看武侠小说，那些邪教门派总是通过下跪等方式神化自己，以达到统率的目的。而李阳的某种方式却与之挺像。难道李阳也走火入魔了？谁来拯救他？ ——海峡都市报 王军荣
Miaro ny tenany amin’ny fampianarana ho mpamosavy i Li Yang ho fampiroboroboana an’i Crazy English ( Anglisy tezitra), ary tsy misy zavatra mahasamihafa izay ataony amin’ny fisolokiana. Tsy mpampianatra teny anglisy aho, fa fantatro kosa hoe tsy mila tezitra izany raha hianatra io teny io. Lasa adala ve ny Anglisy na ny Amerikana rehefa mianatra ny tenin-dreniny ?Amin’ny tantara misy sabatra ireny no nahitako fivavahana (vondrona tsy ara-dalàna) ahitana ny mpitarika azy mikoka (miantsoantso) handohalika mba ho fiarovantenan’izy ireo sy hahazoany fitondrana. Mitovy amin’izany mihitsy ny ataon’i Li Yang. Tena adala ve i Li Yang ? Iza no hamonjy azy ?
Nolazain’i Wang Junrong ao amin’ny Strait Metropolitan Daily fa mihoatra ny 270000 ny mijery ny blaogini Li Yang ary 500 any hoany ny isan’ny mametraka hevitra ao anatin’ny andro vitsivitsy fotsiny. Mazava loatra fa mihoatra noho izay nantenain’i Li Yang izany. Fa tsy mampihemotra azy izany ary mbola nanitrikitrika aza izy ny 8 septambra fa :
Haneho ny hevitro aho eto ; voalohany, izaho no niteny tamin’ny mpianatra handohalika ho mari-pisaorana ny mpampianatra ; faharoa, fomba fanao nefa mavesa-danja ny mandohalika.
Notantarainy izay nitranga tamin’iny fotoana iny, notolorany hevitra ny mpianatra hiankohoka eo anoloan’ny mpampianatra no hahazoana fankasitrahana avy amin’ireto farany, fa navadiny ho fandohalehana izany rehefa hitany fa tsy ho antonona ny toerana. Dia noraisin’ny mpianatra izany ary notanterahiny tsara. Rehefa anontaniana i Li Yang dia lazainy fa midika fandinihana lalina ao anaty io fihetsika io satria adinontsika matetika ny mankasitraka izay manampy antsika. Dia nampitahainy tamin’ny fandohalehan’ny Chancelier Alemana tany Polonina izany avy teo. Ary dia nokianiny ho manao ny fomban’ny Revolision’ny Kolontsaina manaratsy sy mamimngavinga ny hafa ny soratry Xu Xiaoping avy eo.Fa tsy nasian’ny mpivoivoy amin’ny aterineto sira ireo fanakianana ireo, Namaly bontana tao amin’ny blaoginy i Zhang Junyi (张军昱)
Tsy misy maharatsy ny fisaorana tokoa. Na izany aza, ny fampiharana ity fomba izay efa nilaozan’ny maro amin’izao fotoana izao ity dia fanalam-baraka ny atao hoe fisaorana mihitsy.
Miahiahy i Xu Xunlei fa tsy mahazo ny dikan’ny fanabeazana i Li Yang :教育的核心价值是“立人 ”，如今却是“跪人”
Ny votoatin’ny fanabeazana dia fanolokoloana olona iray hahay hahaleo tena sy hitandro ny fahamarinana, fa tsy hanery ny olona handohalika. Tsy mila trerotrerona ny manao izany fihetsika izany hanajana ny mpampianatra.
Mihevitra aza ny sasany fa voatery nandohalika ny mpianatra noho ny fombam-paneriterena ataon’i Li Yang, tahaka ireny any amin’ny fiaraha-monina Nazi ireny. Na dia misamboaravoara tahaka izany aza ny fanakianana mahazo an’i Li Yang, dia misy hatrany ny miaro azy. Ao amin’ny blaoginy moa dia namela hafatra tahaka izay i Wang Zhijie (王志杰) mpankasitraka azy tokoa :
Izay tena mahavita zava-dehibe dia tsy maintsy misedra fiolonolonana !
Tsy misy afaka miteny hoe tena mahalala ny fotoam-panompoana mafy tamin’ny andro lasa tokoa ve ny Shinoa na fanararaotan’i Sina.com fotsiny, na hafetsen’i Li Yang hanana fijery tsara amin’ny fomba tsy mahazatra. Na izany na tsy izany, aty amin’ny lafiny ilan’ny tehin-sabatra, I Li Yang izay jeren’ny rehetra ihany no mahalala izay tena ao an-tsainy. Ary ho fehin'izany rehetra izany dia nanoratra ilay mpiaro hoe :
” 9月10日< 新快报>
Tena marina ny sary, efa nozarina ho amin’io aho (fandohalehana). Mari-panajana ny mpampianatra io. Roa andro taorian’io dia nankany Cheng Du aho hianatra, ary mino aho, fa afaka ho mpianatra anisan’ny mendrika eo ampandohalehana rehefa any.
ary toa lasa mahay mandika teny shinoa i Jentilisa? Ha ha.
19 Septambra 2007, 17:37
Tahaka ny hoe mba fotsiny e!
20 Septambra 2007, 08:28
Hiresaka koa -> Mialy Andriamananjara